Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Faransiiska Wissam Ben Yedder Sheeko Waalidiin Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta oo leh naanaysta "BenyeGOAL". Sheekada Wissam Ben Yedder Sheeko Kale Sheeko Qarsoodi ah ayaa kuugu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Wissam Ben Yedder Sheekada Carruurnimada - Falanqaynta
Falanqayntu waxay ku lug leedahay noloshiisa hore, asalka qoyska, sheekada nolosha ka hor caan ka ah, kor u qaadida sheekada caanka ah, xiriirka, nolosha shakhsiga iyo qaab nololeedka iwm.
Haa, qof walba waa ogyahay inuu yahay weeraryahan waa weyn ugu fiican ee ku takhasusay indhaha. Si kastaba ha noqotee, dhowr ka mid ah tixgelinta biography Wissam Ben Yedder oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilowno.
Wissam Ben Yedder Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Wissam Ben Yedder wuxuu ku dhashay 12th Agoosto 1990 oo ku taal Sarcelles, Faransiis u ah waalidiinta Tunisia. Faransiiska Faransiiska ah ee reerkiisa Tunisia wuxuu ku dhashay cunugiisii ​​afaraad oo lix carruur ah oo ka mid ah waalidiintiisa jilicsan ee sawirkiisu hoos ku qoran yahay.
Wissam Ben Yedder oo ah Waalidiinta.
Wissam Ben Yedder wuxuu ku soo koray degmada Faransiiska ee Sarcelles iyo saaxiibkiisa caruurnimada iyo saaxiibkiisa Riyad Mahrez. Kadibna, xaafaddiisa Sarcelles, oo ah wada-xaajood ku yaalla xaafadaha waqooyiga ee Paris waxaa loo yaqaanaa in ay jiraan rabshado badan oo ka yimaada dadka ka soo jeeda qoysaska Afrikaanka ah ee soo-galootiga ah.
Dulmar guud oo ku saabsan degmada Sarcelles. Mid ka mid ah xaafadaha ugu adag ee Faransiiska.
Ben Yedder ayaa noloshiisa hore u arkay inuu ka adkaaday barbaarin adag oo ka mid ah xaafadaha ugu adag ee ku yaalla caasimadda Faransiiska. Sababtoo ah rabshad soo noqnoqday, waalidiintiisa ayaa cabsi laga qabay inay qoysaskooda u guuraan Garges-les-Gonesse. Intii uu joogay Garges-les-Gonesse, Ben Yedder wuxuu kubad ku ciyaaray kubada cagta si uu uga dhaadhiciyo xaqiiqda murugsan.
Tan iyo markii uu bilowday inuu bilaabo kubadda kubadda cagta ee Garges-les-Gonesse, Wissam Ben Yedder wuxuu lahaa riyo la mid ah kumanaan caruur ah oo kale oo ku koray Garges-les-Gonesse - inuu ciyaaro kubada cagta. Laga soo bilaabo da'da aadka u yar, kubbadda cagta ayaa maskaxdayda ku jirtay.
"Mararka qaar saacad siddeed subaxnimo, markaan u baahnayn inaan tagno dugsi, wuxuu iigu toosi lahaa si aan u sheego inaan u yimaado oo aan ka horimaado isaga."
Daniel Mendy, mid ka mid ah saaxiibadii carruurnimada ee Ben Yedder ayaa u sheegay SoFoot magazine. Little Ben Yedder ayaa ciyaarta ku ciyaari doona roobka iyo barafka, ficil aan mar walba la ogolaan waalidkiis. Waalidiintiisa ayaa inta badan ka cabanaya in uu halis geliyay caafimaadkiisa iyo sidoo kale gurigiisa oo soo noqnoqonaya ka dib markii uu ciyaaray kubada cagta (UEFA warbixinno).
Halkii uu ku ciyaari lahaa caruurnimadiisii, Ben Yedder wuxuu mar walba raadinayay inuu ka ciyaaro heerka sare si uu isku tijaabiyo. Mid ka mid ah xusuusta qoto dheer ee uu leeyahay ilmo ayaa ahaa markii wiilasha waawayni ay waydiisteen inuu la ciyaaro iyaga oo leh:
'Haa, waxaan dooneynaa in aad kubadaada ku ciyaarto kooxdeena.'
Tani waxa ay siisay Ben Yedder yar oo qadarin ah oo sharaf leh iyo rabitaan ah in uu sameeyo waxa ugu fiican. Si kastaba ha ahaatee, wax waqti ah ma aysan qaadin ka hor inta uusan go'aan ka gaarin inay bilaabaan xirfad.
Wissam Ben Yedder Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan - Nolosha Mudnaanta Hore
Ma ahan taageerayaal badan oo aad taqaanaa, Ben Yedder jaceylka ciyaarta oo aan laheyn wax xaddidan ayaa arkay isaga oo ku biiray qaab ciyaareed kala duwan oo la yiraahdo "Futsal"Tani waa nooc kubbadda cagta ah oo lagu ciyaaro maxkamad adag, oo ka yar kubadda cagta, iyo inta badan gudaha gudihiisa. Hoos waxaa ku qoran caddayn caddaynta Ben Yedder's Futsal ID maalmaha hore.
Wissam Ben Yedder ID Futsal-Nolosha Shaqada Hore. Ku darso SoFoot
Ben Yedder ayaa si dhaqso ah uga dhex muuqday kooxda isagoo ka mahad celiyay xirfadiisa ciyaareed oo si fiican ugu haboon ciyaarta. Isagoo ka hadlaya xirfadaha, Ben Yedder waxa uu haystay qalab aan la taaban karin, taabasho farsamo, xarun hoose ee culeyska iyo awoodda uu ku dhammayn karo.
Ben Yedder ayaa ku soo koray ciyaarta, sanado badan ayaa ka caawiyay ciyaartoydiisa Futsal inay ku guuleystaan ​​tartamada kubadda cagta ee u dhaxeeya hantida. Hoos waxaa ka mid ah caddayn muuqaal ah oo ku saabsan maalintiisa Futsal. Deynta C-Foot.
Ka gaabinta video kor ku xusan, si sahal ah ayaad u dhigi kartaa in Yedder ka qaybqaadashada Futsal waa sababta uu u ogaado sida loola tolo labada lugood. Ben Yedder ayaa sii waday inuu ku raaxeysto futsal at Gymnase Allende Neruda ee Garges-les-Gonesse ilaa uu gaaro bartamihii sannadka dhexe.
Wissam Ben Yedder Futsal Karnimo Sanadkiisa Cusub. Ku darso SoFoot.
Dad aad u yar ayaa dhulka ku yaal sida YOURSELF Qofka akhrinaya maqaalkan ayaa sheegan kara inuu arkay Wissam Ben Yedder oo ku raaxeysanaya bakhaar futsal ah.
Wissam Ben Yedder Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan - Waddada loogu talagalay sheekada
Dhowr sano ka dib miyuusigga cusub, Ben Yedder wuxuu bilaabay inuu dib u fakaro haddii uu sii wado Futsal ama inuu u wareego kubada cagta.
Waxay qaadatay illaa 2006 ka hor Ben Yedder oo kubadda cagta iyo FA-ga futsal ahaa wacitaankiisii. Iyadoo la fiirinayo kooxda Faransiiska ah ee u soo baxday Koobka Adduunka ee 2006, Wissam Ben Yedder ayaa bedelay isbedelka guud.
Sannadkii hore 2007, Wissam Ben Yedder ayaa go'aansaday inuu u wareego Saint-Denis halkaasoo uu naftiisa u huray kubadda cagta cawska, go'aanka ugu dambeyntii bixiyay. Dhanka Saint-Denis, Ben Yedder wuxuu kufaraxay xirfadiisa uu ku kasbaday wicitaan waayeelnimo ah.
Wissam Ben Yedder Road si loogu magacaabo sheekada. Ku darso NewsLocker
Markii uu helay khibrad weyn intii uu joogay Futsas, waxa ay aheyd mid fudud in Ben Yedder uu kubada cagta u jebiyo. Tani waxay la timid koox kale, UJA Alfortville oo wakhtigaasi ku ciyaaray heerka afaraad ee Faransiiska.
Wissam Ben Yedder Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan - Kusoo sharax sheekada
Ka dib markii goolal lagu dhaliyey goolal, Ben Yedder ayaa noqday bedelka kooxo badan oo Faransiis ah. Maalinta ugu xusuusta badan ee xirfaddiisa ayaa yimid markii uu mucjisada u muujiyay indho qosol leh. Hadda aan kuu sheegno sheekada.
Maalin ayaa barakeeyay, Michel Moulin, oo ah la taliye hore oo ka tirsan PSG oo xiriir adag la lahaa kooxda Faransiiska ee ugu sareysa, Toulouse ayaa si deg deg ah hoos ugu dhacday goolka dhaliyey Ben Yedder. Waxa uu mar uu yiri isagoo bixinaya xisaabta sheekadiisa;
"Waxaa la ii sheegay ciyaartoy da 'yarta ah oo ahaa dhacdo, sidaasi darted waxaan diyaar u ahay inuu arko ciyaar. Waxaan siiyey wiilkan yar oo tijaabo ah kadibna daqiiqado ka dib 15 waxaan ku idhi, 'Lille waxay isu keentay Maradona' "
Moulin ayaa sidaas yidhi RMC Sport. Moulin ayaa ku guuldareystay inuu u ogolaado Ben Yedder inuu ku biiro kooxda Lille ka hor inta uusan ku biirin Toulouse sababo la xiriirta madaxweynaha kooxda Toulouse Olivier Sadran.
Si degdeg ah ugu soo horjeeda ra'iisul-wasaaraha, tan iyo markii uu ka tagay xaafadaha Paris, mustaqbalkiisa kubada cagta Sevilla ayaa ka baxay awood xoogan.
Wissam Ben Yedder oo ku guuleystay abaalmarinta sheekada. Ku darso ArseDevils
Ka dib markii uu bedelay islamarkaana dhaliyey goolal cajiib ah oo uu ka dhaliyay Manchester United kulankii Champions League ee bishii March 2 13 ayaa Ben Yedder ku siiyey aqoonsi caalami ah oo caalami ah. Cayaartan ayaa keentay in kubada cagta Faransiiska ah ay sidoo kale ka dhigto kooxda ugu sareysa Yurub ka dhisan ee jilibka ka dhigta jilibkooda saxiixiisa. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Wissam Ben Yedder Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan - Nolosha Xiriirka
Iyadoo uu ku soo kordhay abaalmarinta, ma jirto wax beenin ah xaqiiqda ah in taageerayaasha kubada cagta ay weydiiyeen hadii uu haysto gabadh saaxiib ah, oo Wassam Ben Yedder's Wife uu yahay ama wax su'aal ah oo ku saabsan noloshiisa xiriirka.
Wanaagsan, sida wakhtiga qorista, ma jirto haween xooggan oo joogta Wissam Ben Yedder oo ah warbaahinta bulshada ee aan ahayn sawir leh qaawan qarsoodi ah oo ka soo baxa dhammaan tilmaamayaasha hubaal inay dhacaan inay noqdaan xaaskiisa (Fabwags warbixinta).
Wissam Ben Yedder iyo xaaskiisa. Lacagta IG
Ka soo bilaw taariikhda sawirka lagu daabacay warbaahinta bulshada, waxay u muuqataa in labadaba jecel yihiin inay wada joogaan illaa Juun 2017.
Wissam Ben Yedder Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan - Naftaada Shaqsiga
Helitaanka faahfaahinta ku saabsan wissam Ben Yedder noloshiisa gaarka ah waxay kaa caawineysaa inaad hesho sawir buuxa oo isaga ah.
Wissam Ben Yedder Xaqiiqooyinka Nolosha Nolosha. Ku darso BeSoccer.
Bilawga, Ben Yedder wuxuu leeyahay moto gaar ah nolosha iyo taasi waa "si aad u ilaaliso". Wuxuu aaminsan yahay iimaanka iyo kalsoonidiisa xitaa marka arrimuhu si fiican u socdaan.
Ciyaartoyda kubada cagta, sida naga naga naga naga jecel, waxay jecel yihiin xayawaankooda iyo Ben Yedder maaha mid ka reeban. Xitaa waxaad ku jirtaa in aysan jirin daacadnimo ka tagtay ciyaarta casriga ah, hubaal ma tixgelinayo xiriirka lala wadaago Wissam Ben Yedder iyo xayawaankiisa Dolphine.
Wissam Ben Yedder Nolosha Shakhsiyeed - Jacaylka Dolphin. Lacagta IG
Hase yeeshee, noloshiisa gaarka ah ee ka baxsan garoonka, Ben Yedder waa "Philippa"Taas oo ah magac loo isticmaalo in lagu sharaxo qof leh a lover of fardo.
Wissam Ben Yedder Nolosha Shakhsiyeed - Jacaylka Guryaha. Lacagta IG
Wissam Ben Yedder Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan - Nolosha Qoyska
Guuldarada Wissam Ben Yedder waxay u egtahay inuu kor u kiciyo qoyskiisa iyo sidoo kale waxbarashadiisa Futsal.
Ma jiro wakhti xiiso leh oo leh xubnaha qoyska ee Wissam Ben Yedder oo inta badan haysta kulanno ay isugu yimaadaan fasaxyada Tunisia. Daacadnimadiisii ​​si loo hubiyo in aabbihiis, hooyo, walaalo iyo walaalihiis ay raaxo u yihiin waxay la mid yihiin sida uu uga go'an yahay inuu xirfaddiisa.
Wissam Ben Yedder ee Nolosha Qoyska
Dhammaan xubnaha Wissam Ben Yedder ayaa u muuqda inay yihiin Muslimiin diin ah oo diimeed diinta. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarisyada qaar ayaa sheegaya in Ben Yedder uu yahay Yuhuud oo ku xiran magaciisa "Ben".
Wissam Ben Yedder Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan - Xaqiiqooyinka LifeStyle
Wissam Ben Yedder oo aan wax mushahar ah ka helin xirfadiisa kubada cagta kubada cagta.
Hase yeeshee, malaayiin Euro, hase yeeshee, DOESNT waxay u badashaa qaab nololeedka caanka ah sida Ronaldo iyo Mario Balotelli. Ciyaartoyga bilyaniga ah wuxuu jecel yahay inuu u eego fudud ama sabab.
Wissam Ben Yedder's LifeStyle. Lacagta IG.
Ka soo qaadashada sawirka, waxay u muuqataa Wissam Ben Yedder inuu dhadhamiyo baabuurta qalaad sida BUT ma jecla inuu soo bandhigo.
Ben Yedder ayaa kaliya ku soo bandhigay Instagram isaga oo helaya helikobtarro kiro ah oo uu isticmaalay fasaxii xagaaga.
Wissam Ben Yedder oo leh Helikobtar. Lacagta IG
Soo koobid, Wissam Ben Yedder wuxuu jecel yahay inuu ku noolaado nolol caafimaad leh.
Wissam Ben Yedder Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka looyaqaan - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Wissam Ben Yedder (bidix) oo ku hawlan tartamada oo leh qof ka soo horjeeda. Lacagta IG
Waxaa laga yaabaa in aad ogtahay Ben Yedder inuu yahay qof si kalsooni leh ugu toogan kara labada cagood, isagoo dhalinaya goolal. LAAKIIN waxaa laga yaabaa inaadan ka baranin xaqiiqda ah in uu sidoo kale ku fiican yahay baaskiil, ciyaar caan ah oo uu mararka qaarkood u jeedo waqtigiisa.
Ben Yedder ayaa mar hore jebiyey cagtiisa midig isagoo dhalinyaro ah. Ka dib markii uu jebiyey cagta, wuu sugi waayay soo kabashada. Wuxuu tababar u soo qaatay qeybta hoose ee lugtiisa midig ee malabka.
Wissam Ben Yedder Xaqiiqooyin. Sida uu u bartilmaameedsaday goolasha goolasha bidix.
Halkii uu daawan lahaa ciyaartoydiisa oo ka ciyaara garabka bidix isagoo sugaya inuu soo kabsado, Ben Yedder ayaa si geesinimo leh ugu tagay tababarka adag isagoo cagtiisa bidix ka badbaaday. Markii uu tuuray cagtiisa lugta midig, wuxuu sii waday inuu isticmaalo bidixdiisa, isagoo u arkaa inuu yahay mid muhiim u ah xuquuqdiisa. Tani waxay sharraxeysaa sababta aad u jeceshahay Pedro, wuxuu dhaliyay goolal waa weyn isagoo isticmaalaya bidixdiisa.
Wissam Ben Yedder Sheekooyinka Carruurnimada Xogta Waalidka - Soo koobista muuqaalka
Hantida FACT: Waad ku mahadsantihiin akhrinta Wissam Ben Yedder Sheekada Carruurnimada iyo Wacdiyooyinka Joogtaynta ah. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Emmanuel Abriil 30, 2020 XXX: 1 pm
Lucas Hernandez Storyhood Plus Xogta Warka Xogta Leh